擦 - Wikipedia
fanoratana ny sinograma 擦
擦 dia kanji ampiasain'ny fiteny japoney, ny fiteny koreanina ary ny fiteny sinoa. Voasokajy ao amin'ny tōyō kanji 当用漢字 tōyō kanji, kanji fampiasa) ity kanji ity.
Ny tōyō kanji dia kanji miasa indrindra amin'ny fiteny Japoney, ny isany dia misy 1850. Ianarana mandritry ny enin-taona ny ankapoben'ny kanji. Ny joyo kanji (kanji 1945) no nanolo ny toyo kanji tamin'ny 1981. Lasa tola noho izany ny toyo kanji.
Ity kanji ity koa dia ao amin'ny joyo kanji. Ny joyo kanji dia lisitry ny kanji nolazain'ny ministeran'ny fampianarana japoney tamin'ny 10 Oktobra 1981. Ao amin'ny joyo kanji dia misy 1945 kanji lazaina hoe ilaina isan'andro (rehefa mamaky teny na rehefa manoratra) tokony fantatry ny mpianatra Japoney rehefa mivoakan'ny fianarana secondaire. Ny 1006 kanji voalohany ianarany (ao amin'ny joyo kanji) dia tenenina hoe kyōiku kanji.
Rehefa betsaka ny fomba anononana ny kanji iray, tononina arakaraka ny toerana isiany anatin'ny fehezanteny ilay kanji. Rehefa ampiasaina eny ivelan'ny toerana isiany ny kanji iray ka raha betska ny fomba anononana azy, dia azo atoro amin'ny furigana ny fanononana azy ; ny soratra ampiasaina amin'ny furigana dia hiragana na katakana.
Hisy reforman'ny joyo kanji amin'ny 2010
1 Fiteny sinoa sy fiteny kantoney
Fiteny sinoa sy fiteny kantoney [hanova]
Ampiasaina amin'ny fanoratana sinoa nentindrazana sy notsorina ity kanji ity. Ary ireo ny dikany amin'ny fiteny sinoa sy amin'ny fiteny kantoney
Ny fandikana pinyin ny romanizasiôna (fandikana amin'ny abidy latina) ampiasaina any Sina. Any Taiwan, ampiasaina ny fandikana bopomofo (ho an'ny boky fianarana sy ho an'ny finday tsotsotra) na zhuyin fuhao, manana abidy manokana.
Ampiasaina ihany koa ny Wade-Giles ho an'ny anaran-toerana soratana amin'ny teny latina, ara-drafipeo nohon'ny pinyin ny fanoratana Wade-Giles.
Ny fandikana pinyin dia romanizasiôna (fandikana amin'ny abidy latina) ammpiasaina any Sina. Any Taiwan, ampiasaina ny fandikana Bopomofo (ho an'ny boky fianarana teny sinoa indrindra indrindra na koa ampiasain'ny finday tsotsotra) na zhuyin fuhao, ny bopomofo dia manana abidy ho azy manokana avy amin'ny fanononan'ny sinôgrama nenindrazana.
Ampiasaina ihany koa ny Wade-Giles ho an'ny anaran-toerana soratana amin'ny teny latina, ara-drafipeo kokoa nohon'ny Pinyin. Ny olana tena mipetraka amin'ireo fomba fandikana amin'ny abidy latina dia izy tsy manonno ny alôfôna (allophone), izany hoe, ny feo hafa mety avoakan'ny literan-janapeo iray ; satria, tahaka ny amin'ny teny anglisy, ny fiteny mandarina dia teny manana zanapeo maromaro, kanefa dimy monja ny zanapeo azo soratana. Noho izany dia mety samihafa ny feo avoakan'ny literan-janapeo iray anaty fehezanteny iray.
Ny fanononana pinyin an'ity sinôgrama ity dia cā (ca1) Tsindraindray afohezina ho Wade, ny Wade-Giles dia romanizasiôna ny fiteny mandarina. Io romanizasiôna io dia nampiasain'i Thomas Wade teo anivon'ny taonjato faha 19 ary novain'i Herbert Giles tao amin'ny rakibolany sinoa-anglisy tamin'ny 1912 ; io romanizasiôna io no nampiasain'i Taiwan sy ny tontolo miteny anglisy mandritry ny taonjato faha 20.
Ankehitriny, ny pinyin izao no tena ampiasaina indrindra, ary ny Bopomofo, karazany hafa, no ampiasain'i Taiwan (Repoblikan'i Sina).
Ny olana amin'ny sistema Wade-Giles dia izy tsy manoro ny renifeo voatsoka, zavatra atoro amin'ny alàlan'ny apôstrôfo : p, p', t, t', k, k'. Ny eoropeana sy ny amerikana tsy dia zatra an'io sistema io dia manadino na tsy miraharaha ny apôstrôfo ; kanefa renifeo roa samihafa ny renifeo misy tso-drivotra (aspiré) sy ny tsy misy. Ny pinyin dia manoro ny renifeo misy tso-drivotra amin'ny alàlan'ny renifeo b, d sy g (soratra tsy miasa amin'ny Wade-Giles) ho an'ny renifeo p, t sy k misy tso-drivotra.
Ny lafitsara ny fampiasaina ny pinyin ho rômanizasiôna iraisana dia izy manoro ny haavo ny feo amin'ny alàlan'ny diakritika (tsindrim-peo).
Ny fanononana Wade-Giles an'ity hanzi ity dia ts'a1
Lahatsoratra antsipirihany : fiteny kantoney.
Lahatsoratra antsipirihany : Fanoratana ny fiteny kantoney.
Ny fiteny kantoney tenenina dia samihafa amin'ny fiteny sinoa soratana ankehitriny, endrika soratana an'ny fiteny mandarina tsotra. Ny feon'ny fiteny sinoa tenenina dia samihafa be sady lavitra be amin'ny fiteny kantoney. Amin'ny fotoana mandeha, nilaina no nahazo teny tenenina mirindra amin'ny fiteny soratana. Noho izany, dia mampiasa sinograma manokana ho an'ny fiteny kantoney. Maro amin'ny sinograma kantoney no tsy manana sanda mitovy lenta amin'ny fiteny mandarina. Tsy azon'ny tsy mpiteny kantoney ny fiteny kantoney, satria mampiasa fitsipi-pitenenana sy volana tsy azon'ny olona tsy miteny mandarina.
Amin'ny ankapobeny, ny fiteny kantoney dia teny tenenina fa tsy teny soratana. Ny fiteny kantoney tenenina dia samihafa amin'ny fiteny sinoa soratana ankehitriny, endrika soratana an'ny fiteny mandarina tsotra. Ny feo avoakan'ny fiteny sinoa koa dia samihafa be sady lavitra amin'ny feo avoakan'ny fiteny kantoney. Amin'ny fotoana mandeha, nilaina no nahazo teny tenenina mirindra amin'ny fiteny soratana. Noho izany dia mampiasa sinograma manokana ho an'ny fiteny kantoney. Maro amin'ny sinograma Kantoney no tsy manana sanda mitovy amin'ny mandarina. Tsy azon'ny tsy mpiteny kantoney ny fiteny kantoney, na dia kantoney soratana aza, satria izy mampiasa fitsipi-pitenenana sy volana tsy mitovy amin'ny mpiteny mandarina. Ny fanononana ity sinograma ity amin'ny teny kantoney dia chaat3
Ampiasain'ny fiteny koreanina koa ity kanji ity, azy hanja ([hanja]) no anarany amin'ny fiteny koreanina. Tsy ampiasaina intsony ny hanja any Korea avaratra, fa mbola ampiasaina ihany any Korea Atsimo ho an'ny anaran-toerana sy anaran-olona. Matetika any Korea ampiasaina ny hangul, moramora kokoa nohon'ny hanja sady mety tsara amin'ny fiteny koreanina. Ampiasaina koa ny hanja amin'ny haisoratra tsotra.
Voararan'i Yeonsan-gun ny fampianara hangul tamin'ny 1504 avy nanatsikera azy. Ary voarara avokoa ny lahatsoratra voasoratra amin'io abidy io. Ianaran'ny olona tsy manam-pahaizana (tsy afaka mandinika ny soratra sinoa) sy ny vehivavy ny hangul.
Evan'ny fitiavan-tanindrazana koreana ny fanoratana hangul, satria io fomba fanoratana io no mahasamihafa azy amin'ny japoney sy amin'ny sinoa ; ny dikan'ny hangeul amin'ny fiteny koreana dia fanoratan'i Korea amin'ny korea moderna. Tamin'ny Japana resy tamin'ny ady lehibe faharoa, io fomba fanoratana io no ianaran'ny vahoaka, na dia voazara roa aza ilay faritany.
Tamin'ny 2009, ampiasain'ny fiteny cia-cia ny soratra hangul any Indonezia.
Hangul : 찰
Ny fanononana eumhun (음훈; 音訓; avy amin'ny 音 « feo » + 訓 « dika », « fampianarana ») dia fanononana manampy ny mpianatra.
Eumhun : 뿌릴 찰
Ny famakiana on'yomi dia famakiana avy amin'ny fiteny sinoa. Miaraka ampiasaina amin'ny famakiana kun'yomi io famakiana io. Ny famakiana On dia ampiasaina ampiasaina amin'ny teny voalahatra.
Ny famakiana Kun'yomi dia famakiana avy amin'ny fiteny japoney ara-tantara. Alohan'ny nahatongavan'ny kanji tao Japana sy ny famakiana on'yomi miaraka aminy, io no nampiasaina tany Japana. Hevitra fa tsy feo no entiny, ny olana mety misy amin'ny famakiana kun'yomi dia izy manana vaninteny lavalava nohon'ny famakiana on'yomi (manana vaninteny iray ny ankabeazan'ny kanji manana famakiana on'yomi)
on’yomi : さつ (satsu)
kun’yomi : する (suru), さする (sasuru)
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=擦&oldid=155937"	Sokajy : Pejy misy rohin-drakitra tapakaKanjiHanzi sinoaHanja koreana	Menu de navigation
Voaova farany tamin'ny 9 Jiona 2011 amin'ny 21:03 ity pejy ity